ပရာဒို ကားကြီးစီးပြီး အုန်းပင်တက်တဲ့ အလုပ်ပဲ လိုက်လုပ်စားနေတဲ့ ကိုတင်လှိုင် အကြောင်း - Tameelay
ပရာဒို ကားကြီးစီးပြီး အုန်းပင်တက်တဲ့ အလုပ်ပဲ လိုက်လုပ်စားနေတဲ့ ကိုတင်လှိုင် အကြောင်း
” ဗျို့ ကိုခင် ”
ပရာဒို ကားပေါ်မှ ဆင်းလာသူက လှမ်းခေါ်လိုက်ခြင်းပင်။
” ကိုခင်မရှိဘူးး ကိုတင်လှိုင်ရေ ”
” သြော် မရှိဘူးလား ”
” ငါအုန်းပင်တက်ဖို့ လာတာ ဒီအပင်လား ”
သူ့ စကားတွေကို ကြားသဖြင့် ကျွန်ုပ်အံ့သြမိသွားသည်။
စီးလာသောကားက ပရာဒို အပြာရောင်။ အပေါ်က တိုက်ပုံအဖြူ ။ ပုဆိုးက အနက်ရောင်။ အသက်က ၄၀ ဝန်းကျင်လောက်ရှိ၍ ကျစ်လစ်သောခန္ဓာကိုယ် နှင့်ထောင်မောင်းသောအရပ်။ သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လျှင် သူဌေး တစ်ယောက်မှန်းသိသာလှသည်။ထိုကဲ့သို့သော လုက အုန်းပင်တက်ဖို့လာသတဲ့ ။နားကြားလွဲသည့်အထင်နှင့် ကျွန်ုပ်ရပ်ကြည့်နေမိလိုက်သည်။
ထိုသူဌေး ကိုတင်လှိုင်သည် ကားနောက်ဖုံးကို ဖွင့်သည်။ ဓါးမ နှင့် ကြိုးခွေကို ထုတ်သည်။ သူ့အဝတ်အစားများကို ချွတ်ကာ ပုဆိုး ခပ်နွမ်းနွမ်းတထည်ကို ဝတ်လိုက်သည်။
ကြိုးတဖက်တွင်ဓါးမကို ချည်ကာ ကြိုးတဖက်ကို သူ၏ ခါးမှာချည်၍ အုန်းပင်ပေါ်သို့ သွက်လက်စွာ တက်သွားသည်။ အုန်းခိုင်များကို ကျွမ်းကျင်စွာခုတ်သည်။ မြေသို့ ချသည်။
အုန်းသီးခိုင်များ ခုတ်ပြီးသောအခါ ဓါးမနှင့်ကြိုးခွေကို ကားနောက်သို့ပြန်ထည့်သည်။ ခြေလက်များ သန့် စင်ပြီး နဂို အဝတ်အစား ပြန်ဝတ်သည် ။ ကျသင့်ငွေတောင်းယူကာ ပရာဒိုကားပြာကြီးစီး ၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားပေပြီ။
ကျွန်ုပ်၏ ရင်ထဲမှာတော့ နားမလည်ခြင်း မသိခြင်းများစွာနှင့်အတူ အုန်းပင်တက်သောသူဌေးအဖြစ် ကျန်ခဲ့ပါတော့သည်။
” သြော် ဦးဇင်းက ဒီမြို့ကို ခုမှရောက်တာဆိုတော့ သူဌေးကိုတင်လှိုင်အကြောင်းမသိဘူးကိုး ”
” ဟုတ်တယ် ကပ္ပိယကြီးရဲ့ ပရာဒိုကားစီးပြီး အုန်းပင်တက်တဲ့သူဌေး ကျုပ် ခုမှမြင်ဖူးတယ်ဗျာ ”
” ကိုတင်လှိုင်က ထူးဆန်းတယ် ဦးဇင်းလေးရဲ့ ။
သူက ငယ်ငယ်က အရမ်းဆင်းရဲတယ် ။
တစ်​နေ့ တော့ သူထိုးတဲ့ထီက သိန်း၃၀၀ပေါက်တယ် ။
သူက စာမတတ်ပေမတ် အုန်းပင်ပဲတက်တတ်သူဆိုတော့ သူ့ မိန်းမကပဲ စီးပွားရေး ဦးဆောင်လုပ်တယ် ။
သူကတော့ အုန်းပင်ပဲတက်တယ်။ ဒီလို နဲ့ သူတို့ ချမ်းသာလာတာ။ သူ့ သားသမီးတွေက ဆရာဝန်တွေ ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေ။ ကိုတင်လှိုင်က အုန်းပင်တက်တဲ့ အခကြေးငွေကို ရွာလမ်းခင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်!!
” သြော် အဲဒီလိုကိုးးဒါနဲ့ သူ့ သားသမီးတွေကရော ကိုတင်လှိုင် အုန်းပင်တက်တာကို ခွင့်ပြုသလား ”
” အမလေးးဦးဇင်းလေးရယ် ခွင့်ပြုသလားမမေးနဲ့ သူ့သားဆရာဝန်ဆို သူ့အဖေအုန်းပင်တက်တဲ့တခါတခါ သူကိုယ်တိုင်ကားမောင်း လိုက်ပို့ နေတတ်တာ သူ့သားကလည်း ဒီမြို့လေးမှာ အခမဲ့ ဆေးခန်းဖွင့်ထားတယ်လေ ”
” သြော် အာဂ သားအဖကိုး…”
အဲဒီနေ့ က နေရောင် ရှတတလေးပူတဲ့နေ့ ။ မြို့ပြင်က လမ်းလျှောက်ပြန်လာချိန်ပေါ့။ မြို့ပြင်ဖြစ်သဖြင့် ကားငှားလို့ လဲမရခဲ့ဘူး။ ကားတွေတစီးပြီးတစီး ကျွန်ုပ်ဘေးကဖြတ်သန်းမောင်းသွားကြတယ်။ ကျွန်ုပ်ကတော့ လမ်းလျှောက်နေဆဲပင်။
ရုတ်တရက် အပြာရောင်ကားတစီး ကျွန်ုပ်ဘေး ထိုးရပ်လာတယ်။ ကားတံခါး ပွင့်သွားပြီး ကိုတင်လှိုင်ကားပေါ်ကဆင်းလာတယ်။
လက်အုပ်ချီရင်း . . .
” ဦးဇင်းလေး မြို့ထဲပြန်ကြွမလို့လား ”
” ဟုတ်တယ် ဒကာရဲ့”
“တပည့်တော်လည်း မြို့ထဲပြန်မှာ လိုက်ခဲ့ပါလားဘုရား”
ရေငတ်သူရေတွင်းထဲ ကျဆိုသလိုပဲ ကျွန်ုပ် ကားပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တော့တာပဲ။
” ဒကာကိုယ်တင်လှိုင်က ဘယ်ကပြန်တာလဲ”
ကျွန်ုပ်စကားကို သူက အံသြသလို နားထောင်ရင်း ” တပည့်တော်ကိုသိတယ်လား ဘုရား ”
” သိပ်သိတာပေါ့ ပရာဒိုကားနဲ့ အုန်းပင်တက်တဲ့သူဌေးကိုး ”
” တပည့်တော် အုန်းပင်သွားတက်တာလေ ”
” ဒကာက ဘာလို့ အုန်းပင်တက်တာလဲ ”
” အုန်းပင်တက်တာက တပည့်တော် အလုပ်လေ ”
” လူမှန်ရင်အလုပ်လုပ်ရမယ်လေ ”
” ဒကာကြီးတို့ က ချမ်းသာနေတာပဲလေ အလုပ်မလုပ်လဲရတာပဲကို”
” တပည့်တော်တို့က ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘုရား ငွေရှိတာ ”
“ဘယ်​လို ဒကာကြီး ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး ငွေရှိတာဟုတ်လား”
” မှန်ပါ့။ ငွေရှိတာနဲ့ ချမ်းသာတာ မတူဘူးဘုရား အလုပ်လုပ်တာနဲ့ငွေရှာတာလဲ မတူဘူးလေ”
” မှန်ပါ့။ အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာက မိမိရဲ့အတတ်ပညာနဲ့ လောက လူသားတွေအကျိုးသယ်ပိုးတာ ။အဲဒီလို သယ်ပိုးလို့ ထိုက်တန်စွာ ပြန်ရတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ အသက်မွေးတာ အဲဒါ ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ခေါ်တာ ။ ငွေရှာတာကျတော့ တရားတယ်မတရားဘူး မစဉ်းစားဘူး ငွေရပြီးရော ဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုပ်တာ အဲဒါငွေရှာတယ်ခေါ်တယ်ဘုရား ”
” အင်းးချမ်းသာတာနဲ့ ငွေရှိတာကရော ”
” မှန်ပါ့။ ငွေရှိတယ်ဆိုတာက ငွေရှာတယ်။
ရလာတဲ့ငွေနဲ့ သုံးနိုင်တယ် ဖြုန်းနိုင်တယ် တိုက် ကား ဇိမ်ခံ ပစ္စည်းတွေနဲ့ နေနိုင်တယ် ။အာ့ဒါငွေရှိတာ ဘုရား”
” ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကတော့ အရာအားလုံးကို ဥပေက္ခာပြု ပြီး ရှိသမျှနဲ့ ရောင့်ရဲ့နေတတ်တာပါပဲ ”
ကျွန်ုပ်ကို ကျောင်းပို့ ကာ သူပြန်ထွက်ခွာသွားသည်။ ဒီတစ်​ခါ သူထွက်ခွာသွားချိန်မှာတော့ သူ့ ကို နာလည်းခြင်းများစွာ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသောမျက်လုံးတွေနှင့်မျက်စိတဆုံးရပ်ငေးကြည့်နေမိပါတော့သည်။
credit to. ဇိနပုတ္တ (ဂန္ထဝင်) ရသစုံလင် စာအုပ်စင် …
Ko Myo Min Htut ထံမှ လေးစားစွာဖြင့် ထပ်ဆင့် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Photo Credit to Ko Htay Han
” ဗြို့ ကိုခငျ ”
ပရာဒို ကားပျေါမှ ဆငျးလာသူက လှမျးချေါလိုကျခွငျးပငျ။
” ကိုခငျမရှိဘူးး ကိုတငျလှိုငျရေ ”
” သွျော မရှိဘူးလား ”
” ငါအုနျးပငျတကျဖို့ လာတာ ဒီအပငျလား ”
သူ့ စကားတှကေို ကွားသဖွငျ့ ကြှနျုပျအံ့သွမိသှားသညျ။
စီးလာသောကားက ပရာဒို အပွာရောငျ။ အပျေါက တိုကျပုံအဖွူ ။ ပုဆိုးက အနကျရောငျ။ အသကျက ၄၀ ဝနျးကငျြလောကျရှိ၍ ကဈြလဈသောခန်ဓာကိုယျ နှငျ့ထောငျမောငျးသောအရပျ။ သုံးသပျကွညျ့လိုကျလြှငျ သူဌေး တဈယောကျမှနျးသိသာလှသညျ။ထိုကဲ့သို့သော လုက အုနျးပငျတကျဖို့လာသတဲ့ ။နားကွားလှဲသညျ့အထငျနှငျ့ ကြှနျုပျရပျကွညျ့နမေိလိုကျသညျ။
ထိုသူဌေး ကိုတငျလှိုငျသညျ ကားနောကျဖုံးကို ဖှငျ့သညျ။ ဓါးမ နှငျ့ ကွိုးခှကေို ထုတျသညျ။ သူ့အဝတျအစားမြားကို ခြှတျကာ ပုဆိုး ခပျနှမျးနှမျးတထညျကို ဝတျလိုကျသညျ။
ကွိုးတဖကျတှငျဓါးမကို ခညျြကာ ကွိုးတဖကျကို သူ၏ ခါးမှာခညျြ၍ အုနျးပငျပျေါသို့ သှကျလကျစှာ တကျသှားသညျ။ အုနျးခိုငျမြားကို ကြှမျးကငျြစှာခုတျသညျ။ မွသေို့ ခသြညျ။
အုနျးသီးခိုငျမြား ခုတျပွီးသောအခါ ဓါးမနှငျ့ကွိုးခှကေို ကားနောကျသို့ပွနျထညျ့သညျ။ ခွလေကျမြား သနျ့ စငျပွီး နဂို အဝတျအစား ပွနျဝတျသညျ ။ ကသြငျ့ငှတေောငျးယူကာ ပရာဒိုကားပွာကွီးစီး ၍ ပွနျလညျ ထှကျခှာသှားပပွေီ။
ကြှနျုပျ၏ ရငျထဲမှာတော့ နားမလညျခွငျး မသိခွငျးမြားစှာနှငျ့အတူ အုနျးပငျတကျသောသူဌေးအဖွဈ ကနျြခဲ့ပါတော့သညျ။
” သွျော ဦးဇငျးက ဒီမွို့ကို ခုမှရောကျတာဆိုတော့ သူဌေးကိုတငျလှိုငျအကွောငျးမသိဘူးကိုး ”
” ဟုတျတယျ ကပ်ပိယကွီးရဲ့ ပရာဒိုကားစီးပွီး အုနျးပငျတကျတဲ့သူဌေး ကြုပျ ခုမှမွငျဖူးတယျဗြာ ”
” ကိုတငျလှိုငျက ထူးဆနျးတယျ ဦးဇငျးလေးရဲ့ ။
သူက ငယျငယျက အရမျးဆငျးရဲတယျ ။
တဈ​နေ့ တော့ သူထိုးတဲ့ထီက သိနျး၃ဝဝပေါကျတယျ ။
သူက စာမတတျပမေတျ အုနျးပငျပဲတကျတတျသူဆိုတော့ သူ့ မိနျးမကပဲ စီးပှားရေး ဦးဆောငျလုပျတယျ ။
သူကတော့ အုနျးပငျပဲတကျတယျ။ ဒီလို နဲ့ သူတို့ ခမျြးသာလာတာ။ သူ့ သားသမီးတှကေ ဆရာဝနျတှေ ဘှဲ့ရပညာတတျတှေ။ ကိုတငျလှိုငျက အုနျးပငျတကျတဲ့ အခကွေးငှကေို ရှာလမျးခငျးတဲ့နရောမှာသုံးတယျ!!
” သွျော အဲဒီလိုကိုးးဒါနဲ့ သူ့ သားသမီးတှကေရော ကိုတငျလှိုငျ အုနျးပငျတကျတာကို ခှငျ့ပွုသလား ”
” အမလေးးဦးဇငျးလေးရယျ ခှငျ့ပွုသလားမမေးနဲ့ သူ့သားဆရာဝနျဆို သူ့အဖအေုနျးပငျတကျတဲ့တခါတခါ သူကိုယျတိုငျကားမောငျး လိုကျပို့ နတေတျတာ သူ့သားကလညျး ဒီမွို့လေးမှာ အခမဲ့ ဆေးခနျးဖှငျ့ထားတယျလေ ”
” သွျော အာဂ သားအဖကိုး…”
အဲဒီနေ့ က နရေောငျ ရှတတလေးပူတဲ့နေ့ ။ မွို့ပွငျက လမျးလြှောကျပွနျလာခြိနျပေါ့။ မွို့ပွငျဖွဈသဖွငျ့ ကားငှားလို့ လဲမရခဲ့ဘူး။ ကားတှတေစီးပွီးတစီး ကြှနျုပျဘေးကဖွတျသနျးမောငျးသှားကွတယျ။ ကြှနျုပျကတော့ လမျးလြှောကျနဆေဲပငျ။
ရုတျတရကျ အပွာရောငျကားတစီး ကြှနျုပျဘေး ထိုးရပျလာတယျ။ ကားတံခါး ပှငျ့သှားပွီး ကိုတငျလှိုငျကားပျေါကဆငျးလာတယျ။
လကျအုပျခြီရငျး . . .
” ဦးဇငျးလေး မွို့ထဲပွနျကွှမလို့လား ”
” ဟုတျတယျ ဒကာရဲ့”
“တပညျ့တျောလညျး မွို့ထဲပွနျမှာ လိုကျခဲ့ပါလားဘုရား”
ရငေတျသူရတှေငျးထဲ ကဆြိုသလိုပဲ ကြှနျုပျ ကားပျေါတကျထိုငျလိုကျတော့တာပဲ။
” ဒကာကိုယျတငျလှိုငျက ဘယျကပွနျတာလဲ”
ကြှနျုပျစကားကို သူက အံသွသလို နားထောငျရငျး ” တပညျ့တျောကိုသိတယျလား ဘုရား ”
” သိပျသိတာပေါ့ ပရာဒိုကားနဲ့ အုနျးပငျတကျတဲ့သူဌေးကိုး ”
” တပညျ့တျော အုနျးပငျသှားတကျတာလေ ”
” ဒကာက ဘာလို့ အုနျးပငျတကျတာလဲ ”
” အုနျးပငျတကျတာက တပညျ့တျော အလုပျလေ ”
” လူမှနျရငျအလုပျလုပျရမယျလေ ”
” ဒကာကွီးတို့ က ခမျြးသာနတောပဲလေ အလုပျမလုပျလဲရတာပဲကို”
” တပညျ့တျောတို့က ခမျြးသာတာမဟုတျဘူးဘုရား ငှရှေိတာ ”
“ဘယျ​လို ဒကာကွီး ခမျြးသာတာမဟုတျဘူး ငှရှေိတာဟုတျလား”
” မှနျပါ့။ ငှရှေိတာနဲ့ ခမျြးသာတာ မတူဘူးဘုရား အလုပျလုပျတာနဲ့ငှရှောတာလဲ မတူဘူးလေ”
” မှနျပါ့။ အလုပျလုပျတယျ ဆိုတာက မိမိရဲ့အတတျပညာနဲ့ လောက လူသားတှအေကြိုးသယျပိုးတာ ။အဲဒီလို သယျပိုးလို့ ထိုကျတနျစှာ ပွနျရတဲ့ ငှကွေေးနဲ့ အသကျမှေးတာ အဲဒါ ကိုအလုပျလုပျတယျချေါတာ ။ ငှရှောတာကတြော့ တရားတယျမတရားဘူး မစဉျးစားဘူး ငှရေပွီးရော ဘာဖွဈဖွဈအကုနျလုပျတာ အဲဒါငှရှောတယျချေါတယျဘုရား ”
” အငျးးခမျြးသာတာနဲ့ ငှရှေိတာကရော ”
” မှနျပါ့။ ငှရှေိတယျဆိုတာက ငှရှောတယျ။
ရလာတဲ့ငှနေဲ့ သုံးနိုငျတယျ ဖွုနျးနိုငျတယျ တိုကျ ကား ဇိမျခံ ပစ်စညျးတှနေဲ့ နနေိုငျတယျ ။အာ့ဒါငှရှေိတာ ဘုရား”
” ခမျြးသာတယျဆိုတာကတော့ အရာအားလုံးကို ဥပက်ေခာပွု ပွီး ရှိသမြှနဲ့ ရောငျ့ရဲ့နတေတျတာပါပဲ ”
ကြှနျုပျကို ကြောငျးပို့ ကာ သူပွနျထှကျခှာသှားသညျ။ ဒီတဈ​ခါ သူထှကျခှာသှားခြိနျမှာတော့ သူ့ ကို နာလညျးခွငျးမြားစှာ အဓိပ်ပါယျပွညျ့ဝသောမကျြလုံးတှနှေငျ့မကျြစိတဆုံးရပျငေးကွညျ့နမေိပါတော့သညျ။
credit to. ဇိနပုတ်တ (ဂန်ထဝငျ) ရသစုံလငျ စာအုပျစငျ …
Ko Myo Min Htut ထံမှ လေးစားစှာဖွငျ့ ထပျဆငျ့ ကူးယူဖျောပွပါသညျ။
သိန်းတစ်သောင်းကျော်ဘိုး သံဃိက ဒါန… လှူသတဲ့..
ညောင်ရွှေမြို့ သာစည်ရပ်မှာ.. နေထိုင်တဲ့ အပျိုကြီး ညီအစ်မ သုံးယောက်.. ဒေါ်လှခင်(၉၁) နှစ်.ဒေါ်လှဌေး(၇၄)နှစ်. ဒေါ်သန်းဌေး (၇၁)နှစ်တို့က.. ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီးဆာဆောမောင်ရဲ့. အတွင်းဝန် ဦးဖိုးလှိုင်၏ မြေးများ.. ဖြစ်ကြပါတယ်။ . ၁၉၁၃ ခုနှစ်ကတဲကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့.. နှစ်၁၀၅ နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့.. ပေ ၁၅၀ ပတ်လည်လောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့.. သိန်းတစ်သောင်းကျော်ကာလတန်ဘိုးရှိတဲ့.. ဘိုးဘွားပိုင်အိမ်ခြံဝင်းးကြီးကို.. …
သင့်ကျောက်ကပ် သန့်စင် ကျန်းမာရေးအတွက် ငွေ ၁၀၀၀ လောက်သာ ကုန်ကျမယ့် အိမ်တွင်းဆေးနည်း
ကျောက်ကပ်က သွေးထဲရှိ အဆိပ်အတောက်တွေ အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အမျှ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေ ကျင့်သုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေစုပြုံလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်တာတွေ၊ အဆိပ်အတောက်တွေများလာရင် ကျောက်ကပ်ပစ္စည်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သဘာဝနည်းဖြင့် ကျောက်ကပ်ကို ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နံနံပင်ကတော့ …
လက်ဖဝါးပြင် နှစ်ခု စလုံးမှာ “X” လက္ခဏာလေး ပါရှိပါက ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဒီလို လက္ခဏာ ပါဝင်တဲ့ သူတော်တော်များများက အောင်မြင်တဲ့ လူကြီး လူကောင်းတွေဖြစ်တက်တယ်။ လူသားအားလုံးနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ကောင်းမွန်တယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု့တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတက်တယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း ကြည့်ကောင်းတယ်။ အချိန်ကို ပေးဆပ်ထားသလောက် အလုပ်အကိုင်တွေ …